Halloween - a n'abalị zuru nke ndị mmụọ ọjọọ
Facts banyere Halloween. Halloween bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa otu agadi na-ekpere arụsị omenala na ọ dịghị onye kwesịrị itinye aka na, ọ dịghị ihe ọzọ
Na 1840s, were tumadi Irish na ya nke a Celtic ememe mgbe kwaga ka America. Na America, na ọ ghọọ a nnukwu oriri, ọbụna n'etiti Ndị Kraịst na-eme ememe na October 31. Si America, o nwere "Americanized" ruo afọ ụfọdụ, laghachiri Europe na oghere "skulls" nke pumpkins, amoosu-set, emenye ụjọ masks, scythes, ekwensu ndụdụ na tombstones na plastic ma ọ bụ osisi.
onsdag 09 oktober 2019 16:46 📧
Halloween bụ a tupu oge ndị Kraịst na-ekpere arụsị onu na sitere tumadi n'etiti ndị mmadụ otu Celts. Ndị a bụ ndị mbụ si Asia Minor, ọbụna site Galatia (oge a Turkey).
The Celts na-kwuru na European akụkọ ihe mere eme, na oge mbụ gburugburu 500 BC, mgbe mgbe a Mbugharị bi na mgbe ugwu nke Europe; ebe gburugburu Danube na n'ebe ọdịda anyanwụ Germany. Na Europe, ha wee site na aha "gaeler" ma ọ bụ "okporo".
N'oge a ihe ike mgbasa oge na Celts gbasaa n'ógbè ha, n'ebe ọdịda anyanwụ kwupụta Belgium na karịsịa na Britain, karịsịa Ireland, ndịda Italy na Spain na n'Iru-anyanwu na Asia Minor, ebe ha na-ọzọ biri na Galeshia.
"Galates" bụkwa Greek aha maka Celts. Nke nta nke nta wee Scotland, Wales na Ireland akpan akpan, na-ahuta ka n'ụlọ nke Celts. Celt ememme, na ndụ n'ozuzu, e mere site anwansi na ihe omumu nke ike site Druids (nchụàjà-eze). Àjà ememe okpukpe nke osisi, mgbe mgbe Mistletoe na esie ya na nri, obi ụtọ na-nri, ndị nkịtị ọcha, ma na-achụ mmadụ n'àjà mere (lee Lindow Man na Manchester, onye ọkpụkpụ a chọpụtara na 1984).
Ọnwụ na ndụ chi Samhain
Stonehenge na England a na-ewere otu oge a na-achọ na "keltism", na-a ukwuu irè mkpoko nke ikike anwansị. Nke a bụ ebe oge a ụbọchị ndị amoosu na ndị dibịa afa na séances na ememe okpukpe ememe. The Celts na-eme ememe ihe ubi ememme na New Year na 1 November. Ọ bụ a na-ekpere arụsị nsọ ụbọchị. The party kara akara ọgwụgwụ nke okpomọkụ ọnwụ wee si otú na n'oge mgbụsị akwụkwọ ọchịchịrị entry na ọdịdị, nke n'onwe ya pụtara ọhụrụ mmalite nke ndụ. N'ụwa, na ndị dara epupụta, pulitere ọhụrụ bulbs.
N'oge a nke afọ pụtara kwa, na ákwà n'etiti ndị dị ndụ n'ụwa na ndị nwụrụ anwụ ụwa (n'etiti incarnations) bụ thinnest. The mgbede tupu New Year, a "nsọ mgbede", na "Hallow Eve", ie October 31, mgbe ha nwere echiche na ndị nwụrụ anwụ, ọ dịghị ihe ọzọ ndị nwụrụ n'oge gara aga afọ, na ndị ọzọ, ma ọma na ihe ọjọọ ume na mmụọ - laghachi n'ụwa n'okpuru management ọnwụ na ndụ chi (ìhè na ọchịchịrị) Samhain. Ọ chịrị ma na cosmos na ifo.
On 31 October bụ ya mere ma ndị niile dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ mgbede. Ọ na-akpọ "nna ochie Night," "Anfädernas Night" ma ọ bụ "nna nna 'abalị".
A nzukọ na-acha ọcha na nwa anwansi
Mgbe ndị nwụrụ anwụ, na ndị ọzọ na ume na mmụọ, wee Earth na mgbede a, nwere, na otu aka, kandụl na bonfires maka ezi na ha mere ka ebe ndị ha na-anabata, mata na ha, mee ka obi jụrụ ha site anya dị ka ha, na ndị ọzọ na-emegharị anụ na mmenyenjo ha azụ otu mgbe, anya njọ karịa ha na na-na na ụlọ jụụ.
Ìhè, ọkụ, ọbara, na akara nke ọnwụ na ọchịchịrị e weere. White na nwa anwansi e zutere, were ọnu nke nwa anwansi. Druids udo nnukwu bonfires mmenyenjo ize ndụ e kere eke ndị dị otú ahụ ihe ọjọ amoosu wee na-efe efe. A jụrụ ndị mmadụ na-etinye ihe ezinụlọ onwe ọkụ na kama download ọhụrụ ọku site Druids ọkụ iji chebe onwe ha.
Ndị bịara na ndị mmụọ na, nwere ike ma na-enye onyinye maka New Year, n'ihi na ihe atụ, nkwa nke nloghachi nke ìhè mgbe ọdịda na oyi na ezi ọmụmụ na-abịa afọ - ma ọ bụ ibudata na mkpụrụ obi nke ndị nwụrụ na mgbede a / n'abalị, ọbụna na-achọ mmadụ àjà maka afọ ọhụrụ. Ọ na-eche uru ma ọ bụ nkọcha.
Ebe a bụ ihe ndabere nke ụfọdụ dịkọrọ ndụ ụmụ mbipụta n'ọnụ ụzọ abalị tupu All Saints Day: "swiiti ma ọ bụ ụgbọ ala", "Atọ-ma ọ bụ-na-emeso" ( "Spratt ma ọ bụ onyinye"). Samhain a na-gwara ma na onye na olileanya na-adịghị Reaper. N'ihi ya, ọ na-atụ anya na-akwanyere. The Christian Church n'oriri nke All Saints Day, bilie ike imeri ndị ọgọ mmụọ Celtic owuwe ihe ubi ememme.
Na n'oge Irish Christian omenala bụ na-arịọ maka achịcha na ụlọ, na na nloghachi, ikpe ekpere maka mkpụrụ obi nke ndị nwụrụ anwụ ikwu. N'ikpeazụ, e nwere a mgbagwoju anya, eleghị anya ihe mgbaasị azịza "förkristnandet" - ọbụna na-ekpere arụsị sacred Asherim na ebe di elu e egbutu dochie Christian ụka na ebe ili ozu - nke mere na "ihe niile dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ n'abalị," ndị na-ekpere arụsị echiche, bụ, ụfọdụ elu aga "Allahelgonaafton", ndị ọzọ okwu Halloween.
Na 1840s, were tumadi Irish na ya nke a Celtic ememe mgbe kwaga ka America. Na America, na ọ ghọọ a nnukwu oriri, ọbụna n'etiti Ndị Kraịst na-eme ememe na October 31. Si America, o nwere "Americanized" ruo afọ ụfọdụ, laghachiri Europe na oghere "skulls" nke pumpkins *, amoosu-set, emenye ụjọ masks, scythes, ekwensu ndụdụ na tombstones na plastic ma ọ bụ osisi.
Ụfọdụ data-atụ aro na ọ bụ a ụlọ ọrụ na njakịrị dị ka 1991 malitere na igba egbe na Sweden. A flyer si a nri yinye a afọ ole na ole gara aga bụ: "Ya mere, kpọkọta gị spökkompisar na ekwensu enyi ka a n'ezie Halloween ọzọ na inwe njikere maka a n'abalị zuru ndị mmụọ ọjọọ."
Ya mere na nke ahụ bụ otú ha na-egbu, nne nne, nna, ụmụnne ya, enyi ga-ele anya dị ka ma ọ bụrụ na ha si na ndị nwụrụ anwụ dị ka ghosts, ọkpụkpụ na ndị mmụọ ọjọọ! Gịnị mere eji ejiji ọ na-adịghị mgbe ndị ọzọ dị ka a na-akpọ ezigbo ndị mmụọ na "ndị mmụọ ozi" na anwansi, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iṅomi ndị ikwu ha na ndị enyi bụ ndị nwụrụ - na na ugbu a pụtara na-aga azụ?
O doro anya na Halloween ememe n'ihi na ọtụtụ Swedes nnọọ ihe ọcha egwuregwu, enweghị ihe ọ bụla chere na ọ ga-abụ ihe ọzọ n'azụ. Ma n'ihi gịnị ka ọchịchịrị na ọ bụ iru ala na--pụta ìhè? Na-imenyeujo ikpo pụta ụwa nchegbu?
Na-egwu egwu nwoke nwụsịrị iji na-esi pụọ ọrụ tupu n'ezie ọnwụ? Halloween ga-hụrụ dị a dị mkpa ụzọ mgbapụ si eziokwu? Ee, Halloween bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa otu agadi na-ekpere arụsị omenala na ọ dịghị onye kwesịrị itinye aka na, ọ dịghị ihe ọzọ niile a Christian. Ọnwụ na ọjọọ bụ otuto.
Na akwụkwọ, ụmụaka na-amụta jụ ime ihe ike. Na ọ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ichebe ụmụaka, na mbụ na-eche banyere ụmụ ọdịmma. The madu na aha nke nnwere onwe na-awa na n'otu oge ụmụaka ndị a nke ọnwụ na-eme ihe ike na akara na ụlọ akwụkwọ, na media na ọha na eze n'ozuzu. Ugboro abụọ ụkpụrụ na naivety, m na-ekwu! Olee otú oké mkpa anyị maka a party karịa ebe a na Sweden n'oge ogologo na ọchịchịrị n'oge mgbụsị akwụkwọ, Halloween bụghị ezi ihe nlereanya!
Biko akara, dị ka a Christian, na mmụọ ma na na ọha arụmụka a na-ekpere arụsị na nwa-keonyeiro mgbede. Ma Zaa na-egwu egwu costumed ụmụ a Christian amamihe. Kwuo, sị, n'ihi na ihe atụ, obiọma, na unu adịghị eme Halloween. Sie ike karịa ọ na-emekarị adịghị n'ezie ịbụ. Agbalị "Kraịst" Halloween, M pụtara aka nke ọzọ, bụ na-ezighị ezi ụzọ na-aga.
* Dị ka ihe Irish akụkọ mgbe, e nwere a ajọ uzú aha ya bụ Jack. Jack ghọgburu ekwensu na mere ya na-ekwe nkwa mgbe na-ekwu na mkpụrụ obi ya. Mgbe o mesịrị nwụọ, ọ na-agọ banye n'eluigwe n'ihi na ọ mere ka ukwuu n'ụwa. Mgbe ahụ, ọ na-ike ejedebe na Ekwensu, ọ nọgidere a na-awagharị awagharị mkpụrụ obi n'ụwa. Ọ jụrụ Devil ka ọ dịkarịa ala na-a-ejegharị. Devil la mgbe a obere ọkụ oghere tonip Jack riri. Ebe ọ bụ na-awagharị restlessly gburugburu na ya "na-ejegharị" na-achọ ebe a na-anọ. Na egwuregwu na akụkọ ifo na-akpọ onye dị otú ahụ oriọna maka "Jack-o-na-ejegharị", karịsịa aiming mmenyenjo efep mmụọ ọjọọ na.